Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
Feb 17, 2017ARRIMAHA BULSHADA, HORUMARKA DALKA, WARAR
(AKHRISO) 13)WAA MAXAY NASIIB?
Nasiibku waa marka lalakulmo fursado oo laga faaideysto. Dadka badan kooda ma ahan qaar adkeysi u leh inay sii wadaan socdaalkooda ilaa ay kala kulmayaan fursadaha ku haboon dadka bilaa nasiibka ah ma ahan ku waan helin weligood kafaaideysto fursadaha soo maraan, laakiin waa kuwa ey horay usoo martay fursado kala duwan horyna u rajadhigay.
waxaa hubaal ah in qof walbo naga mid ah ey soo marto fursaddo qaali ah haba ku soomarto qaabab kala duwan intaadan lakulmin fursadaha ka abuuran furaha lagu guleysto. Waa inaad kuftaa oodna kacdaa ilaa aad kala kulmeysid mesha aad usocotay [[TOMAS ADIISOON]] wuxuu ahaa ninkii shiday laambada aan iftiinsano wxuuna isku dayay  mar wuxuuna ku guuleestay markii 1000 maad hadaba ninkaa mayahay nin nasiib leh ?
haa waa nin nasiib badan leh sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee soo saaray laambada aan iftiinsaneyno wuxu sidoo kale fahansanaay inuu ku celceliska yahay nasiib dadka badankood ma ahan qaar udiyaar ah markey fursadaha albabka usoo garaacaan si aad unoqo qof nasiib leh waa inaaad noqotaa qof dadaal badan si aad uga faaideysato markaad lakulantid fursadaha qaaliga ah. Tusaale ahaan kasoo qaad hadii aad lakulanto si lama filaan ah madaxweynaha dalka oo aadan kaseynin qaabka codsiyada loweydiisto dadka madaxda ah kulankaasi mayahay mid aad ka faa’iideysatay .waxaadna noqon doontaa qof uu nasiibka albaabka usoo garacay haddana aan kafurin. Ugudambeyn noqo qof marwalba maciin bida talasaarashada Alle iyo ku xirnaashadiisa .
14) Waa maxaay talaabooyinka isbedelka lagu gaaro?
Waa inaad ogaataa xaalada aad hada ku jirto ee ubaahan is bedelka waxad is weydiineysaa nolosha halkeebaa ka taaganahay oo u baahan inaan hagaajiyo.Waxaa la yiraahdaa qofka bini aadamka ah noloshiisa marka laga hadlaayo waxaa jirto toddobo meel oo ubaahan inuu wax ka qabto oo kor ukiciyo.
Adiga iyo Allah xiriirkiina waa inaad xoojisaaa
Caafimaadkaaga waa inaad ka fikirtaa
Reerkaada waa inaad ka fikirtaa
Dakhligaaga ama dhaqaalahaaga waa inaad ka fikirtaa
Aqoontaada waa inaad hormarisaa
Shaqadaada wa inad ka fikirtaa
Xiiriirka aad la leedahay dhamaan asxaabtaada iyo bulshada waa inaad xoojisaa.
Ugu dambeyn waxaad is weydiineysaa su’aalahaan soo socdo
15) SIDEE LOO SAMEYSTAA QORSHO?
Qorsho inaad sameysato hadii aad rabto waxaad ka jawaabtaa sedax suaal.
Halkee baan ku sugunahay?
Halkee baan usocdaa oo aan rabaaa inaan gaaro?
Maxaa igaarsiinaayo xaaladaha aan ku jiro inaan ka baxo kadibna xaalad cusub galo ?
Qorsho inaad sameysato waa wax aad u muhiim ah naftaada waana laf dhabarta hormarkaaga.
Mar kale halkaan kala soco qaybaha kale
Previous PostMaamulka Somaliland oo siducufnimo iyo caadifad leh uga digey saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta u safrida Muqdisho!! Next PostMuuqaal: Faysali Waraabe oo Markuu Laascaanood yimid Noqday Soomaali Wadani ah iyo Hadal aan looga Baran!